Non, Je ne Regrette Rien | Ma Shwe Mi
October 26, 2009 at 5:37 pm2comments
မရွှေမိ အကြိုက်ဆုံးပြင်သစ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ Edith Piaf ရဲ့ Non, Je ne Regrette Rien တဲ့။ အော်စကာဆုရခဲ့တဲ့ La Vie En Rose ကားရဲ့ ဇတ်ကောင် ပေါ့။ အဲဒီဇတ်ကားမှာတော့ ပြင်သစ်မင်းသမီး Marion Cotillard﻿ ကသရုပ်ဆောင်တာပါ။ အဲဒီကားလဲ တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ မျက်ရည်တ၀ဲဝဲနဲ့ ကြည့်ရတဲ့ကားပေါ့။
ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ မူရင်းအဆိုတော်Edith Piaf ရဲ့ သီဆိုဟန်လေးတွေကိုလဲသဘောကျတာရယ် ၊စာသားတွေကိုကြိုက်တာရယ်ကြောင့် တော်တော်လေးနားထောင်ဖြစ်တဲ့သီချင်းပါ။ ဘ၀မှာ ဘာအတွက်မှ နောင်တမရချင်တဲ့သူတွေ ကြိုက်မယ့်သီချင်းပါ 😛
အောက်က ကလစ်ကတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းပါ။ နှစ်ခုယှဉ်ကြည့်ရင် ပိုအရသာရှိတယ်။ မင်းသမီးလဲ အော်စကာရလိုက်တာ ထိုက်တန်တယ်။ မူရင်းအဆိုတော်နဲ့ တော်တော်ကြီးဆင်အောင်ကိုသရုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ့ရတယ်။ မရွှေမိ မျက်ရည်ကျမိတာ ဒီသီချင်းထဲမှာ ပါတဲ့ဇတ်ဝင်ခန်းတွေပေါ့ 😛
မရွှေမိ သိသလောက် ဂျာနယ်ကျော်မျိုးဆက်များအကြောင်း တစေ့တစောင်း	သကြံန်လက်ဆောင်
1. ZawMinn | November 2, 2010 at 12:48 am
Merci pour les chansons d’Edith Piaf. Essayez Kass Patricia, aussi. J’ai travaillé dans l’Alliance France de Rangoun dernière il ya 15 ans. Vous n’aimez pas les chansonsd‘Edith Piaf “la vie en rose?
2. လူပျိုကြီး | October 26, 2009 at 7:19 pm
Bonjour Ma Shwe Mi Bonjour
ဒါပဲသိတယ်နော် ထပ်မပြောနဲ့ 😛